Global Voices teny Malagasy » Shina: Ny Fomba Nanovan’ny Bilaogy Ny Fiainako · Global Voices teny Malagasy » Print
Shina: Ny Fomba Nanovan'ny Bilaogy Ny Fiainako
Voadika ny 16 Janoary 2018 6:23 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Miranah
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Teknolojia
(Marihana fa efa tamin'ny volana Oktobra taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Ho atao ao Hanzhou amin'ity faran'ny herinandro ity ny Fihaonamben'ny Bilaogera Shinoa . Mba hiomanana amin'izany, nanambara fandefasana lahatsoratra momba ny “Fomba nanovan'ny bilaogy ny fiainako?” ireo mpikarakara.
Nodinihin'i Keso ny lahatsoratra ary nanambara ireo lahatsoratra roa tsara indrindra izy omaly . Ireo bilaogera roa, Zola sy Xiao Mei, no nahazo ny loka tapakila roa hidirana amin'ny fihaonambe.
Ka ahoana ary no fomba nanovan'ny bilaogy ny fiainan'izy ireo?
Zola: Novain'ny Bilaogy: Tantaran'ilay bilaogera antsoina amin'ny anaram-bositra hoe Zola 
Talohan'ny nanoratako bilaogy, olona latsaky ny 1000 no nahafantatra ahy; Taorian'ny taona vitsivitsy nanoratako bilaogy, fantatro fa efa mihoatra ny 1000 ny isa. Tamin'ny alàlan'ny fibilaogina, nihaona tamin'ireo namana maro be mitovy taona amiko aho, ary koa tamin'ny taranaka teo aloha. Lasa mamaky bilaogy marobe tsy toy ny teo aloha aho, ary niitatra ny fifandraisana ara-tsosialiko.. Ankehitriny, manana fifandraisana 927 ao amin'ny Gtalk aho, ny sasany amin'izy ireo dia namana Gmail, ny sasany nahazo ny fifandraisana gtalk avy amin'ny blaogiko. Na dia tsy maro tamin'izy ireo aza no nanomboka nifampiresaka tamiko, mino aho fa mahafantatra ny anarako ny atsasak'izy ireo farafahakeliny.
Xiao Mei: fiainana bilaogin'ilay bilaogera hosoka:
Tamin'ny Jolay 2004, nanana ny bilaogiko voalohany aho. Ao amin'ny tranonkala fampiantranoana bilaogy ao an-toerana izany. Talohan'izany nahaliana ahy kokoa ny BBS. Na izany aza, tsy tiako ny BBS lehibe toy ny Tianya sy Mop, marobe loatra ny olona ao, ka mety tsy ho tazana mihitsy ny olona antonony tahaka ahy. Tiako ny toerana kely kokoa sy mafana kokoa. Ny fahatakarako voalohany momba ny bilaogy dia ny tranonkala manokana. Nohavaoziko imbetsaka ny votoaty, ny momba ny fahatsapako, sy ny fivoriana ary nizara tamin'ny hafa momba ny asa soratra sasany tiako. Tamin'izany fotoana izany, toy ny korontan-javatra ny bilaogy. Tsy ratsy ny taham-pitsidihana izay afaka manatanteraka ny reharehako. Na izany aza, maro loatra ireo mpandalo fotsiny, rehefa nandeha ny fotoana, nahatsiaro leo aho …
… Jolay 2005, daty iray izay hotsaroako amin'ny fiainako manontolo. Namana tao amin'ny blaogiko: avy any Shanghai, Guangzhou, Nanking, Nouvelle Zélande, sns … miasa mangina amin'ny alalan'ny aterineto izy ireo ary nanomana fanomezana manokana ho ahy tamin'ny tsingerintaona nahaterahako.
Misy lahatsoratra manokana avy amin'i Xin yuan-kang, bilaogera jamba:
Xin yuan-kang: Varavarankely ara-panahin'ny bilaogy ho an'ny maso mainty (tsy mahita) 
Tany am-piandohan'ity taona ity, nandre tamin'ny namako aho fa malaza be amin'ny aterineto ny famahanana bilaogy, afaka manoratra ny fahatsapany sy ny hevitra ao amin'ny bilaogy ny tsirairay. Mizara fihetseham-po tamin'ny lasa sy amin'izao fotoana izao. Nanazava ny masoko ity vaovao mahafaly ity. Tena mety amiko izany. Nanana hevitra momba ny lahatsoratro voalohany aho: “manokatra varavarankely ho an'ny saiko” …
… Efa nanoratra nandritra ny tapa-taona aho, na dia tsy tena manampy ny fihariako madinika aza izany, raha ny marina, efa nandrasako izany. Satria ho an'ireo izay mamaky ny bilaogiko na ireo namako izay mankafy otra, tsy voatery mijanona ao an-tanànako izy ireo. Na dia izany aza, ny sasany tamin'ireo mpanjifanay, rehefa avy namaky ny blaogiko, dia nilaza tamin'ireo mpitsabo mpanotra ato aminay fa: “Rehefa avy mamaky ny bilaoginao, dia manana fahatsapana aho fa tena mankafy fiainana ianao, matoky ny fiainana. Mahatsiaro tena voahaja aho.
Ny lahatsoratra hafa rehefa dia azo jerena ao amin'ny takelaka fanehoan-kevitra ao amin'ny fanambarana  (zh).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/01/16/113192/
 nanambara ireo lahatsoratra roa tsara indrindra izy omaly: http://www.cnbloggercon.org/2006/CreativeContest
 Novain'ny Bilaogy: Tantaran'ilay bilaogera antsoina amin'ny anaram-bositra hoe Zola: http://www.zuola.com/weblog/?p=566
 Varavarankely ara-panahin'ny bilaogy ho an'ny maso mainty (tsy mahita): http://blog.sina.com.cn/u/493e8bb2010005j2
 takelaka fanehoan-kevitra ao amin'ny fanambarana: http://www.cnbloggercon.org/blog/archives/2006/10/21/creative-contest/